आज श्रावण १३ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! - kageshworikhabar.com
आज मिति वि. सं. २०७८ साल श्रावण १३ गते। बुधबार । तपाईंको आजको राशिफल
काममा बिशेष सावधानी अपनाउनु होला । चिसो वस्तुको कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । आफन्तको वियोग हुनसक्छ । धार्मिक कार्यमा धन हराउने सक्छ । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । गलत स्थानमा धन खर्च हुनसक्छ ।
परिवारमा शुख शान्ति छाउनेछ । आफन्तसँग समय रमाइलोमा बित्ने छ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । रमाइलो स्थानको भ्रमण हुनेछ । महिला वर्गबाट लाभ र सम्मान प्राप्त हुनेछ । पुत्र र श्रीमितिको शुभ समाचार मिल्नेछ ।
शारीरिक र मानसिक सुख अनुभिती हुनेछ। नोकरी तथा व्यवसायमा तपाईंको कार्यको प्रसंसा हुनेछ। काममा प्रोत्साहन बढ्नेछ। धन लाभ हुनेछ । पदोन्नतिको योग रहेको छ । समाजमा प्रतिष्ठा बढ्नेछ। सरकारी काममा सफलता पाउनुहुनेछ। दाम्पत्य जीवन आनन्दमय हुनेछ।
धार्मिक कार्यमा समय खर्च हुनेछ । कतैको धार्मिक यात्रा हुनेछ । शारीरिक र मानसिक रुपमा खुशी हुनुहुनेछ। भाग्य वृद्धि हुनेछ । भाइ बहिनिसंग समय रमाइलो बित्नेछ । बैदेशिक यात्राको लागि समय उचित रहेको छ । नोकरी गर्नेहरुको लागि लाभ हुनेछ ।
केही कठिनाइहरूको सामना गर्नपर्ने हुनसक्छ । स्वास्थ्यको बिशेष ध्यान दिनुहोला । घर बाहिर खाना नखानु होला । स्वास्थ्यको लागि धन खर्च हुनसक्छ। नकारात्मक बिचार मनमा हाबी हुनेछ । सन्तान शुख प्राप्त हुनेछ ।
दिन अनकुल हुनेछ । जीवन साथिसंग को नजिकको क्षणको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुनेछ । विपरित लिंगी संगको आकर्षण बढ्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्नेछ । साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुनेछ। नयाँ वस्त्र तथा वाहन पाउने योग बनेको छ।
स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। सन्तानको समस्याले चिन्ता बढ्नेछ । मानहानि हुनसक्छ । आर्थिक लेन-देन नगर्नुहोला । विद्यार्थीहरूले अध्ययनमा सफलता प्राप्त गर्नेछन्। वित्तीय योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ।
मन उदास हुनेछ। मनमा चिन्ता बढ्नेछ । परिवारमा कलह हुनेछ । आमासँग विवाद हुनसक्छ । सार्वजनिक रुपमा अपमानित हुन सकिन्छ, सचेत रहनु होला । सहयोगीको सहयोग मिल्नेछ ।
आज आनन्द र उत्साहले भरिएको दिन हुनेछ। घरमा शुभ कार्य हुनेछ। नयाँ कार्य गर्नको लागि शुभ समय रहेको छ । साथि भाइ संगको भेट रमाइलो हुनेछ। बसाइ सराइ तथा यात्राको सम्भावना रहेको छ । मन खुशी हुनेछ ।
Previous articleप्रधानमन्त्री र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता
Next articleआजको मौसम : धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना